Akwụkwọ Nkọwapụta Ihe Nweta Globallọ Akwụkwọ Gburugburu ụwa na Nkwakọ ngwaahịa plastic plastic 2019-2026 Site na Ngalaba: Dabere na Ngwaahịa, Ngwa Ma Mpaghara | Haishu
Akwụkwọ Nkọwapụta Ihe Nweta Biolọ Akwụkwọ Gburugburu ụwa na Nkwakọ ngwaahịa plastic plastic 2019-2026 Site na Ngalaba: Dabere na Ngwaahịa, Ngwa Ma Mpaghara
Dabere na Nchọpụta Egwuregwu Data Bridge Market ahịa maka ụlọ ọrụ biodegradable na ụlọ nkwakọ ngwaahịa plastik na-adabere kpọmkwem na mmụba ọha na eze na ndị na-eri. Uche nke ihe bara uru banyere ngwongwo ndị a na-ere ere na-ebelata mmepe azụmaahịa n'ofe ụwa. Ihe ntinye a na-ewere mmụba na-eji ụzọ na-eme ka ihe dị mma na-adịwanye mma maka iwepụ otu ihe eji plastic. Ọdịdị dị elu nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na ịrị elu nke ihe biotic na ihe osisi nwere ike igbochi uto ahịa nke windo amụma ahụ e buru amụma.
Ugbu a ajụjụ bụ nke ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ isi egwuregwu Player ga-nwaa? Nnyocha Ọrịa Ahịa data buru amụma maka nnukwu uto na North America na Europe na-ebili n'iji ngwaahịa ngwongwo na ịma maka njirimara enyi na gburugburu ebe obibi banyere akwụkwọ na-adịghị emebi emebi na nkwakọ ngwaahịa plastic.
Mpempe akwụkwọ biodegradable & packaging plastic bụ ngwaahịa dị mma n'anya ma ghara ịhapụ carbon ọ bụla n'oge usoro mmepụta ahụ. Achoro maka ihe ndi mmadu na achota ihe banyere ha na ihe ndi ozo. Akwukwo ogwu ha na abawanye nihi na oha n’iru n’etiti ndi mmadu nwere mmetuta ha site na iji ya eme ihe nke oma ma obu ya maka otutu ulo oru dika ogwu, nri, ahuike na gburugburu ya. Foodlọ ọrụ nri na ihe ọ beụverageụ na-adabere na ngwa ndị eji eme ihe site na iji ụdị plastik dị iche iche.
A na-atụle ya ka akachasị mma ma baa uru maka nchekwa nke ngwaahịa nri. Ndi mmadu ebidola oriri nke ihe eji eme nkwuputa ihe ndia. Ya mere, a na-achọkwu akwụkwọ maka biodegradable & ahịa nkwakọ ngwaahịa plastic. A na-atụpụta ụwa biodegradable akwụkwọ & plastic packaging market na-edebanye aha CAGR dị mma nke 9.1% na amụma amụma nke 2019 ruo 2026.